Abdominoplasty (ဝမ်းဗိုက်အရေပြားနှင့်အဆီပိုများ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း) - Hello Sayarwon
Abdominoplasty (ဝမ်းဗိုက်အရေပြားနှင့်အဆီပိုများ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ခွဲစိတ်ကုသမှုများ » Abdominoplasty (ဝမ်းဗိုက်အရေပြားနှင့်အဆီပိုများ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း)
Abdominoplasty (ဝမ်းဗိုက်အရေပြားနှင့်အဆီပိုများ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း) ကဘာလဲ။
ဝမ်းဗိုက်အရေပြားနှင့်အဆီပိုများ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း ဆိုတာဘာလဲ။
ဝမ်းဗိုက်အပိုအဆီနှင့် အရေပြားများ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း ဆိုသည်မှာ အဆီနဲ့ ပိုနေတဲ့ လျော့တိလျော့ရဲ အရေပြားကို ဖြတ်ထုတ်ပြီး ဗိုက်ချပ်စေတဲ့ အလှအပရေးရာ ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခွဲစိတ်မှုဟာ ဝမ်းဗိုက်နံရံ ပတ်ပတ်လည်မှာ ရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကိုပါ ဆွဲဆန့်တောင့်တင်းစေပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်အရေပြားနှင့်အဆီပိုများ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း တွေကို ဘာကြောင့် လုပ်ကြတာလဲ။
တကယ်လို့ သင့်ဝမ်းဗိုက်မှာရှိတဲ့ အရေပြားတွေဟာ လျော့ရဲ တွန့်ကြေနေပြီး ရုပ်ဆိုးနေရင် ဆရာဝန်က ဒီခွဲစိတ်မှုကို ပြုလုပ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် သင်ဟာ ဗိုက်ချပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း ဒီခွဲစိတ်မှုကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ခွဲစိတ်သင့်တဲ့ အခြားအကြောင်းရင်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
ဝမ်းဗိုက်အပိုကြွက်သားများ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း လှပလိုပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။
မကြာခဏ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဒီခွဲစိတ်မှုကို ပြုလုပ်ပြီး ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေကို ဆွဲဆန့်ကာ ပိုနေတဲ့ အရေပြားကို ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။
အဝလွန်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ အဆီနဲ့ ဝမ်းဗိုက်ပတ်ပတ်လည်က အပိုဖြစ်နေတဲ့ အရေပြားတွေကို ဖယ်ထုတ်ဖို့လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်အရေပြားနှင့်အဆီပိုများ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း ကိုမလုပ်ခင် ဘာတွေ သိထားသင့်သလဲ။
ဒီခွဲစိတ်မှုဟာ လူတိုင်းနဲ့ မသင့်လျော်ပါဘူး။ ဒီခွဲစိတ်မှုကို မပြုလုပ်သင့်တဲ့အခြေအနေတွေ ရှိပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းချင်လို့ (သို့) ကလေးလိုချင်လို့
နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချို၊ အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းသောရောဂါ လိုမျိုး နာတာရှည် ပြင်းထန်ရောဂါ တွေရှိရင်
ဒီခွဲစိတ်မှုကို မပြုလုပ်မီ နားလည်ထားသင့်တဲ့ အချက်တွေရှိပါတယ်။ တကယ်လို့မေးခွန်းတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် သင့်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို အချက်အလက်တွေ ပိုမို သိရှိစေဖို့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုရဲ့ အဖြစ်များတဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကတော့
မေ့ဆေးရဲ့ ဆိုးကျိုးများ (ဓါတ်မတည့်ခြင်းဟာ အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုတောင် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်)
သွေးထွက်ခြင်း (သို့) ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း
ခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာ သွေးခဲတွေဟာ ပြင်းထန်တဲ့ နှလုံးရောဂါဖြစ်တဲ့ နှလုံးရပ်ခြင်း၊ သွေးခဲခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်တဲ့ အနာတစ်လျှောက် တစ်ရှူးများ သေဆုံးခြင်း
အာရုံခံနိုင်တဲ့ အာရုံကြောပျက်စီးခြင်း၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထုံကျင်ခြင်း
အမာရွက်ယားယံခြင်း၊ ရုပ်ဆိုးသော အမာရွတ်ထင်ခြင်း
တစ်ခါတရံ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကို ကာကွယ်ဖို့ နောက်ထပ် ခွဲစိတ်မှုတွေ လိုအပ်ခြင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ပြည့်စုံတဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေ မဟုတ်သေးပါဘူး။ သင့်ရဲ့ နေထိုင်ပုံနဲ့ ရောဂါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ အဝလွန်တဲ့ လူနာတွေဟာ ရင်သားရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ကြိုတင်မျှော်လင့်ထားနိုင်ဖို့ သင့်မှာ ရှိတဲ့ရောဂါတွေကို သင့်ဆရာဝန်ကို ပြောပြထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီခွဲစိတ်မှု မပြုလုပ်မီ ဖြစ်နိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို နားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ မေးစရာရှိတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်အရေပြားနှင့်အဆီပိုများ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း တွေကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်သင့်သလဲ။
ပထမဦးစွာ ဒီခွဲစိတ်မှုအတွက် အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဆရာဝန်ကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ဆရာဝန်ကို တွေ့ပြီး ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုမပြုခင်မှာ ပြင်ဆင်ဖို့ ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ခွဲစိတ်မှုအပြီးမှာ သင့်အမျိုးတစ်ဦးဦးက သင့်ကို အိမ်ပြန်ခေါ်သွားသင့်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုအပြီး ပထမနေ့မှာ ခွဲစိတ်မှုရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ၂၄ နာရီစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီလိုစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းထားသင့်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်အရေပြားနှင့်အဆီပိုများ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း ပြုလုပ်ချိန်မှာ ဘယ်လို ဖြစ်မှာလဲ။
ဒီခွဲစိတ်မှုကို ထုံဆေးနဲ့ ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ၂-၅ နာရီအထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်အပိုအဆီနှင့် အရေပြားများ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
အပြည့်အဝခွဲစိတ်ခြင်း – ပိုနေတဲ့ အရေပြားကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ချက်အပါအဝင် ဗိုက်ပတ်ပတ်လည်က ကြွက်သားကို ဆွဲဆန့်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းခွဲစိတ်ခြင်း – ချက်အောက်က ပိုနေတဲ့အရေပြားကို ဖယ်ထုတ်ပြီး ဗိုက်ကြွက်သားကို ဆန့်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုမှာ အောက်ပါအဆင့်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်က ဝမ်းဗိုက်မှာ ကွေးတဲ့ ဓါးရာတစ်ခုကို တင်ပါးဆုံတစ်ဖက်ကနေ အခြားတစ်ဖက်ကို ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဟာ အရေပြားနဲ့ အဆီတစ်ရှူးကို ဖယ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဟာ လျောရဲနေတဲ့ ဗိုက်ကြွက်သားတွေကို ဆွဲဆန့်ပြီး ချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပိုနေတဲ့ အရေပြားကို ဖြတ်ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ချက်ကို သူ့နဂိုနေရာမှာ ပြန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဟာ ခွဲစိတ်ရာကို အပ်နဲ့ အပ်ချည်၊ ကလစ် တွေ သုံးပြီး ပြန်ချုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်မှာ စိုးရိမ်မှုတွေ မေးခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်အရေပြားနှင့်အဆီပိုများ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်း လုပ်ပြီးသွားချိန် ဘာဖြစ်မှာလဲ။
ခွဲစိတ်မှုတစ်ခုခု လုပ်အပြီးမှာ ချုပ်ရိုးကို ဂွမ်းနဲ့ စည်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ချုပ်ရိုး ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကနေ ကာကွယ်သင့်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးနေ့တွေမှာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၆ ပတ်အထိ ပြင်းထန်တဲ့ အလုပ်တွေကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ များသောအားဖြင့် နေပြန်ကောင်းအောင် အနည်းဆုံး လေးပတ် အနားယူသင့်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က ဘာလုပ်သင့်တယ် ဘာမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 2, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 6, 2017
Abdominoplasty. http://emedicine.medscape.com/article/1271693-overview. Accessed 29 May 2016.
Trunk liposuction. http://emedicine.medscape.com/article/1272262-overview. Accessed 29 May 2016.
Information for commissioners of plastic surgery. http://www.bapras.org.uk/docs/default-source/commissioning-and-policy/information-for-commissioners-of-plastic-surgery-services.pdf?sfvrsn=2. Accessed 29 May 2016.
Abdominal Reduction. www.bapras.org.uk. Accessed 29 May 2016.
ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, လူနေမှုဘဝနှင့် ကျန်းမာရေး, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း
ခန္ဓါကိုယ်အမျိုးအစားအလိုက် diet လုပ်နည်းများ
ကိုယ်က ဘယ်လိုဝတဲ့ အမျိုးအစားထဲ ပါနေတာလဲ။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ။ ။